“Aaway Van Dijk?” – Rafael van der Vaart oo ku jees jeesay Harry Maguire – Gool FM
(Europe) 21 Oct 2019. Laacibkii hore xulka qaranka Holland ee Rafael van der Vaart ayaa qaab jees jees ah kaga hadlay qiimaha ay Manchester United kala soo saxiixatay Harry Maguire kooxda Leicester City xagaagii hore, kaasoo gaarayay ilaa iyo 80 milyan ginni.
Rafael van der Vaart ayaa wuxuu dhinaca kale aaminsan yahay in daafaca ay isku wadanka ka soo wada jeedaan iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk uu u qalmo in lagula saxiixdo 300 milyan ginni, mar haddii ay Man United ka bixisay saxiixa Maguire qiimo dhan 80 milyan ginni.
Kooxaha Man United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, wuxuuna Rafael van der Vaart isbar-bardhig ku sameeyay labada daafac ee Virgil van Dijk iyo Harry Maguire.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo xigtay hadalada Laacibkii hore xulka qaranka Holland ee Rafael van der Vaart waxaana ka mid ahaa:
“Maguire wax buu sameyn karaa, laakiin haddii uu u qalmo lacago badan, waxay ka dhigan tahay in Van Dijk wuxuu qiimahiisu yahay 300 milyan ginni”.
Intaas kaddib Rafael van der Vaart ayaa wuxuu u dhaqaaqay inuu ku jees jeeso daafaca kooxda Man United iyo xulka qaranka England, isagoo xusay qaab ciyaareedkiisii inta lagu gudi jiray kulankii dhex maray xulalka Holland iyo England, kaasoo ku soo idlaaday 3-1 oo loogu awood sheegtay xulka lagu naaneyso Saddexda Libaax, koobkii UEFA Nations League.
“Waxaan ka shaqeenayay TV ka howgala dalka Holland intii lagu jiray ciyaartii UEFA Nations League ee u dhaxeysay xulalka Netherlands iyo England, waxaan isku sheegnay inuu ahaa ciyaaryahankii ugu xumaa ciyaarta, laakiin labo bilood kaddib qiimahiisa wuxuu gaaray 80 ilaa iyo 90 milyan, taasoo ah wax aan la rumeysan Karin”.